किन रेलमा विदेश यात्रा गर्छन् उत्तर कोरियाका शासक ? « Postpati – News For All
किन रेलमा विदेश यात्रा गर्छन् उत्तर कोरियाका शासक ?
पुस २४, बेइजिङ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन मंगलबार बिहान रेल चढेर चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका छन्।
सन् २०११मा आफ्ना बुवा किम जोङ इलको निधनपछि उत्तर कोरियाका नेता बनेका उनको यो दोस्रो चीन भ्रमण हो। यसअघि गत वर्ष मार्चमा उन पहिलो विदेश भ्रमणका लागि चीन आएका थिए।
गत साल नै उनले दक्षिण कोरियासँगको सीमावर्ती गाउँमा दक्षिणका राष्ट्रपति मुन जाइ इनसँग वार्ता गरेका थिए भने जुनमा सिंगापुरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग शिखर वार्ता गरेका थिए।
पहिलो पटक चीन आएको ९ महिनापछि किम मंगलबार फेरि बेइजिङ पुगेका छन्। दुबै भ्रमणमा किमले आफ्नै रेल बेइजिङ ल्याएका छन्।
संसारभरिका नेता समय र सुविधाका कारण हवाइजहाज र हेलिकोप्टरमार्फत् यात्रा गरिरहेका बेला किम किन यातायातको पूरानो साधनमा यात्रा गर्छन्? के उनको रेल विशेष छ?
तेस्रो पुस्ताका उनले पनि आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण रेलबाटै गरे। इललाई हवाइजहाज यात्रा मन पर्दैनथ्यो। उनी हवाइ यात्रा गर्न डराउँथे। सन् २००२ मा उनी तीन हप्ता लामो रूस यात्रामा गएका थिए।
रेलबाट इलले झन्डै दर्जन विदेश भ्रमण गरेका थिए तीमध्ये धेरै पटक उनी चीन आएका थिए। रेलमा संसारका सबैभन्दा महंगा वाइन राखिएको हुन्छ। यहीभित्र बार्बिक्यू पनि गर्न मिल्छ। मार्चमा बेइजिङ आएको किमका रेलमा २१ डब्बा थिए। ती सबै हरिया रङका थिए।
सबैका झ्यालमा कालो शिशा थियो ताकि बाहिरबाट भित्र को बसेको छ भन्ने कसैले नचिनून्। सन् २००९ मा दक्षिण कोरियाका सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेको समाचारअनुसार किमको सुरक्षामा ९० डब्बा हुन्थे।